ट्रम्पको उदयमा फिलिपिन्स मख्ख, हतियार अमेरिकाबाटै किन्ने
२०७३ कार्तिक २९ सोमबार, एजेन्सी। फिलिपिन्सले अमेरिकाबाट २६ हजार राइफल हतियार खरिद गर्ने भएको छ । सोमबार फिलिपिनी प्रहरी प्रमुखले यस अघि राष्ट्रपति डुटर्टीले अमेरिकासँग कुनै पनि सैन्य हतियार खरिद नगर्ने घोषणा गरेपनि फिलिपिन्सले पुन: अमेरिकाबाटै हतियार खरिद गर्न लागेको जनाएका छन् । तर डुटर्टीले अकस्मात आफ्नो घोषणा फिर्ता लिनुमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको उदयलाई लिइएको छ । अमेरिकाको चर्को आलोचना र सैन्य सम्झौंतासम्म खारेज हुने चेतावनी दिँदै आएका डुटर्टी ... बाँकी अंश»
डोनाल्ड ट्रम्प र सी जिनपिङ चाँडो भन्दा चाँडो भेट्न सहमत !
२०७३ कार्तिक २९ सोमबार, काठमाडौं। अमेरिकी नव निर्वाचित राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ्गले चाँडो भन्दा चाँडो भेट्ने सहमति गरेका छन्। अन्त्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीका अनुसार टेलिफोन वार्तामा दुवै जना सहमत भएका हुन्। केही समय अघि चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग आफ्नो कुनै कुरा नभएको बताईरहेका ट्रम्पले एक्कासी चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिले अमेरिका र चीनको काँधमा विश्वको जिम्मेवारी रहेको ट्रम्प निर्वाचीत हुने बित्तिकै प् ... बाँकी अंश»
न्यूजिल्याण्डको ७.८ म्याग्नेच्युडको भूकम्पमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु
२०७३ कार्तिक २९ सोमबार, क्राइस्टचर्च । न्यूजिल्याण्डमा आइतबार आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । न्यूजिल्याण्डको समयअनुसार आइतबार मध्यरातिमा आएको भूकम्प ७.८ म्याग्नेच्यूडको मापन गरिएको थियो । क्राइस्टचर्चको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आएको सो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दक्षिणी टापु रहेको बताइएको छ । केन्द्रबिन्दु विलिङटनदेखि २०० किलोमिटर टाढा पर्छ । मध्यरातमा भूकम्प आएकाल ... बाँकी अंश»
मोदीले भारतीयलाई किन भने थप ५० दिनलाई कष्ट खेप्नुस् ?
२०७३ कार्तिक २८ आइतबार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५ सय र १ हजारको नोट नचल्ने घोषणा गरेलगत्तै अकस्मातको उक्त निर्णयले हलचल मच्चियो । मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले ५ सय र १ हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लागेको घोषणा गरे । वुधबारदेखि घोषणा लागु भएपछि भारतीय नागरिक बैंकहरुमा नोट साट्न लाइन लागेका छन् । हरेक बैंकहरुमा नोट साट्न मानिसहरुकको ठूलो लाम हुने गरेको छ। नागरिकलाई निकै सास्ती भएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो घोषणाले जनता ... बाँकी अंश»
न्यूजिल्याण्डमा ७.४ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प
२०७३ कार्तिक २८ आइतबार, एजेन्सी । न्यूजिल्याण्डको क्राइष्टचर्च नजिकै शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अमेरिकी जिओलोजिकल सर्भे यूएसजीएसले भूकम्पको झट्का ७.४ रेक्टर स्केल मापन भएको जनाएको छ । क्राइष्टचर्चदेखि करिब ९५ किलोमिटर दुरीमा रहेको स्थानमा भूकम्प गएको हो । क्राइष्टचर्च लगायत ठूलो क्षेत्रमा उक्त भूकम्प महसुस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् । भूकम्पले कयौं घर र भौतिक संरचना भत्किएका बताइए पनि क्षतिको यकिन विरण आइसकेको छैन । सन् २०११ मा पनि क्राइष्टच ... बाँकी अंश»
पाकिस्तानको कुजदारमा आत्माघाती हमला, ५२ जनाको मृत्यु, सय बढी घाइते
२०७३ कार्तिक २८ आइतबार, एजेन्सी । पाकिस्तानको हिमाली क्षेत्रस्थित कुजदार जिल्लामा आत्मघाती हमला हुँदा कम्तीमा पनि ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । धार्मिकस्थल नजिक शनिबार साँझ भएको सो हमलामा सय भन्दा बढी घाइते भएको पाकिस्तानी संचार माध्यमले जनाएका छन् । एएफपीको रिपोर्ट अनुसार सो हमलाको विद्रोही समूह स्लामिक स्टेट आईएसले जिम्मा लिएको छ । उक्त धार्मिक स्थलमा हरेक शनिबार एक हजार देखि १५ सयको संख्यामा मानिसहरु आउने गरेका छन् । घटनास्थल निकै दुर्गम र मोबाइल सेवा कमजोर भएकाले ... बाँकी अंश»
क्लिन्टनको दाबी : आफू पराजित हुनुमा एफबीआई निर्देशकको हात
२०७३ कार्तिक २८ आइतबार, अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति पदमा पराजित डेमोक्रेटिक हिलारी क्लिन्टनले हालैको अप्रत्याशित पराजय पछाडि त्यहाको संघीय जाँच ब्युरो ‘एफबीआई’ का निर्देशक जेम्स कोमी प्रमुख कारण रहेको औल्याएकी छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनको तीन दिनअघि निर्देशक कोमीले क्लिन्टनका इमेलहरुबारे एफबीआईले अनुसन्धान गर्दा त्यसमा क्लिन्टनको कुनै गल्ती नरहेको बताएको थियो । क्लिन्टनले आफ्ना ठूला दाताहरुसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको र उक्त कुरा मिडियामा खुलासा भएको बीबी ... बाँकी अंश»
सरकारको स्वरुपबारे छिट्टै निर्णय लिइनेः ट्रम्प
२०७३ कार्तिक २७ शनिबार, वासिङटन (अमेरिका)। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा हालैमात्र निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले ‘भेट्रान्स डे’ बिदालाई नयाँ सरकारको स्वरुप निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने बताउँदै शुक्रबार आफ्नो सरकारमा सहभागी सदस्यहरुको छिट्टै टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। न्युर्योर्कमा आगामी कार्ययोजनाबारे व्यस्तताकाबीच छलफल भएको खुलासा गर्दै आफ्नो ट्वीटमार्फट अब छिट्टै आगामी सरकारमा कस्ता सदस्यले आफूलाई सहयोग गर्ने छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। ... बाँकी अंश»
ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकाभरी प्रदर्शन
२०७३ कार्तिक २६ शुक्रबार, वासिङ्गटन । निर्वाचन अभियानभरी आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएका नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध बिभिन्न रुपबाट देशभर प्रदर्शन भै रहेका छन् । निर्वाचन अभियानको क्रममा आवेशमा आई उनले मेक्सिकालीहरुलाई “अपराधी”, अफ्रिका तथा अन्य मुलुकबाट आएका आप्रवासीहरुलाई “बदमास र देशद्रोही” भन्ने शव्दले आरोप लगाएपछि रुष्ट भएकाहरु र हिलारी क्लिन्टनको हारपश्चात् खिन्न भएका डेमोक्र्याटिक समर्थकहरु समेत मिलेर देशका सबैजसो ठूला, साना स ... बाँकी अंश»
जर्मन महावाणिज्य दूतावासमा आक्रमण, ६ को मृत्यु ११५ घाइते
२०७३ कार्तिक २६ शुक्रबार, मजार ए सारिफ (अफगानिस्तान)। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त बाल्खको मजार ए सरिफ इलाकामा अवस्थित जर्मन महावाणिज्य दूतावासको कार्यलयलाई लक्ष्यगरी एक आत्मघाती बम आक्रमण भएको छ । आक्रमणमा परी छ व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै अन्य ११५ जना घाइते भएका स्थानीय सुरक्षा अधिकारीले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् । आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोटक पदार्थले भरिएको एक कार महावाणिज्य दूतावासको पर्खालमा ठोकाएको स्थानीय प्रहरी प्रमुख सयेद कमाल सदातले एएफपी समा ... बाँकी अंश»
ट्रम्पको आक्रोश, प्रदर्शनकारीलाई मिडियाले उक्सायो
२०७३ कार्तिक २६ शुक्रबार, एजेन्सी । अन्तत: अमेरिकी नव निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले आफुविरुद्ध भएको विरोध प्रदर्शनप्रति मुख खोलेका छन् । बिहीबार उनले विरोध प्रदर्शनप्रति आक्रोश पोख्दै प्रदर्शनकारीलाई मिडियाले उक्साएको आरोप लगाए । ट्रम्पले आफ्नो आधिकारीक टुइटर मार्फत राष्ट्रपतीय निर्वाचन खुल्ला र सफलतापूर्ण सम्पन्न भएपनि अहिले मिडियाले उचालेका कारण केही सिपालु प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गरेको बताए । ट्रम्पको विरुद्धमा आज दोस्रो दिन शुक्रबार पनि दर्जनौं बढी मुख् ... बाँकी अंश»
डेढ घण्टा मिटिङमा के कुरा भयो ट्रम्प र ओबामाबीच ?
२०७३ कार्तिक २६ शुक्रबार, एजेन्सी । अमेरिकी नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प र बहालवाला राष्ट्रपति बाराक ओबामाबीच भेटवार्ता भएको छ । ह्वाइट हाउसस्थित भएको भेटवार्तामा दुईबीच बाह्य र आन्तरिक नीतिबारे कुरा भएको छ । डेढ घण्टा लामो मिटिङमा ओबामाले ट्रम्प सफल हुन चाहेमा आफुहरु उनको सफलताको लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ओबामाले यसमा ट्रम्प सफल भए मात्र मुलुक पनि सफल हुने कुरा प्रस्ट्याएँ । ट्रम्पले आफुले ओबामासँग यस अघि भेट नभएको भएपनि उनीप्रति आफ्नो उच्च ... बाँकी अंश»
चीनका पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई मृत्युदण्डको घोषणा
२०७३ कार्तिक २६ शुक्रबार, एजेन्सी। चीनले आफ्नो पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरेको छ । पूर्व प्रहरी प्रमुख हाओ लिपिङलाई विभत्स हत्या, भ्रष्टचार गरेको आरोपमा शुक्रबार उत्तरी राज्य सान्छीको ताइयुवान सहरस्थित एक अदालतको मृत्युदण्डको फैसला गरेको हो । लिपिङलाई गत मार्च महिनामा एक जना व्याक्तिको विभत्स हत्या गरेको भन्ने पनि आरोप छ । प्रहरी सेवामै रहँदा लिपिङले करीब ३ लाख अमेरिकी डलर भ्रष्टचार गरेको अधिकारीलाई उद्रित गर्दै चिनियाँ संचार माध्यमले जनाएक ... बाँकी अंश»
२०७३ कार्तिक २५ बिहिबार, मस्को (रसिया)। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता डोनाल्ड ट्रम्पको विजयबाट रसियालार्य ‘सुखानुभूति’ भएको भन्ने समाचारको बिहीबार क्रेमलिन प्रशासनले खण्डन गरेको छ। रसियाली उपविदेशमन्त्री सर्जेइ र्‍याकोवले ट्रम्पको भित्री वृत्तका सहकर्मीसँग अमेरिकी निर्वाचनका समयमा सामान्य सम्पर्क हुने गरेको कुरालाई स्वीकार गरे पनि मस्कोले ट्रम्पको पक्षमा कुनै सक्रिय सहयोग र समर्थन नजनाएको बताए। निर्वाचनका समयमा बुधबार अमेरिकी राष ... बाँकी अंश»
यस्ता छन् ट्रम्पले खाएका कसम, तर के उनले पुरा गर्लान ?
२०७३ कार्तिक २५ बिहिबार, काठमाडौं। बुधबार अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्प यतिखेर विश्वभर छाएका छन् । हुन त अमेरिका जस्तो एउटा विश्व शक्ति राष्ट्रको शिखर पदमा पुगेको व्याक्तिको सर्वत्र चर्चा हुनु स्वभाविक पनि छ । जीतको खुशी त एकातिर छ नै तर आफुले बाडेको सपना र लिएको जिम्मेवारीको वजनले ट्रम्पको टाउको भारी हुन थालिसकेको छ । त्यसो त अमेरिकीहरु माझ वाचा गरिएका तिनै कसमहरु ट्रम्पका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन अचुक अस्त्र बन्यो । तिनै ... बाँकी अंश»
ट्रम्पसँग झगडा गर्ने साउदी अर्बपतिले समेत दिए बधाई
२०७३ कार्तिक २५ बिहिबार, एजेन्सी । एक वर्ष अघि एक साउदी अर्बपति व्यवसायी अलवालिड विन तलाल र नव निर्वाचित अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच सामाजिक संजाल टुइटरमा निकै चर्काचर्कि भएको थियो । यद्यपि, वुधबार ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि साउदी अर्बपति तलालले ट्वीटरमा भएको आपसी झगडालाई किनारा लगाउँदै ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन् । तलालले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर पेज मार्फत अमेरिकी राष्ट्रपतिमा विजयी भएकोमा ट्रम्पलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन् । म ... बाँकी अंश»
लन्डन ट्राम दुर्घटनामा सातको मृत्यु, ५० घाईते
२०७३ कार्तिक २५ बिहिबार, लन्डन। लन्डनमा बुधबार भएको ट्रयाम दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । सुरुङबाट निस्किने क्रममा स्पिड बढी हुँदा नजिकको बारसँग ठोकिएर उक्त दुर्घट्ना भएको ट्राममा सवार घाईतेले बताएका छन्। दुर्घट्नाग्रस्त ट्राममा च्यापिएकालाई निकाल्न घण्टौ लागेको थियो। अग्नि नियन्त्रक र प्रहरीको टोलीले च्यापिएकाको उद्दार गरेको थियो। घटनामा घाइते भएका ५० जनालाई स्थानीय अस्पतालमा भर्नागरी उपचार सुरु गरिएको लण्डन प्रहरीले बताएको छ । ट्रया ... बाँकी अंश»
ट्रम्पले जितेपछि अमेरिकामै तनाव, विभिन्न राज्यमा हजारौं सडकमा, भन्छन्, ‘ट्रम्प हाम्रो राष्ट्रपति हैन’
२०७३ कार्तिक २५ बिहिबार, न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको केही घण्टामै डोनाल्ड ट्रम्पको विरोध चर्किएको छ । अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा ट्रम्पमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै विरोधीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ‘ट्रम्प हाम्रो राष्ट्रपति हैन’ भन्दै प्रदर्शनकारीले सडक नै अवरुद्ध गरेका छन् । ट्रम्पको जीतको विरोधमा न्यूयोर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, शियाटल, टेक्सस, आयोवा, क्यालिफोर्निया, बोस्टनलगायतका मूख्य शहरमा विरोध प्रदर्श ... बाँकी अंश»
ट्रम्पको जीतलाई लिएर फ्रेन्च राजदूतले भने-विश्व ध्वस्त हुँदैछ
२०७३ कार्तिक २४ बुधबार, एजेन्सी । डोनाल्ड जोन ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै विश्व समुदायमा तरंग फैलिएको छ । कतिपयले ट्रम्पको जीत राम्रो भएको टिप्पणी गर्दै ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन् भने केहीले विश्व समुदायकै लागि घातक रहेको टिप्पणी गर्दै उनको विजय पचाउन सकेका छैनन् । अमेरिकाका लागि फ्रेन्च राजदूत जेराड अराउले ट्रम्पको जीतप्रति आफ्नो असन्तुष्टी रहेक संकेत गर्दै आफ्नै आखाँ अगाडि अब विश्व ध्वस्त हुन लागेको बताए । टुइटरमार्फत सो कुरा बताएका उनले उक्त टुइट ह ... बाँकी अंश»